Nyochawa ya, m ga-asị na ọ bụ n'ezie mbụ mmetụ nke ndị ahịa m njem. M si Facebook gaa Amazon ebe m gụrụ peeji nke ngwaahịa. Ọ dị mma nke ukwuu mana enweghị m ike ịkọwa mmefu ahụ n'oge ahụ. M wee banye Youtube iji hụ ụdị ụdị mma ndị folks na-eme n'èzí ahịa.
Ebumnuche nke post a bụ iji kwurịta ebe a ga-esi ree ahịa a Amazon Echo. Ọ bụrụ na ọ bụ aka mbụ, ọ ga-ekewet Mark dị ka influencer… ezie na ọ bụghị a influencer maka ngwaọrụ na nkà na ụzụ. Aga m ekwu na okwu Mark banyere Echo bụ ihe mmata karịa na njem ndị ahịa m. O nweghi ebe tupu ihe Mark kwuru bụ na amaara m ọkaibe na atụmatụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na ụdị njirimara bụ mmetụ ikpeazụ, ịkwụ ụgwọ mgbasa ozi na ịre ahịa ga-abụ isi mmalite nke ire ere ahụ. Ma ha abụghị n'ezie. Ọ bụrụ na ị juo m usoro ịzụ ahịa nke mere ka m kwenye ịzụta Echo, M ga-aza:
Ọ bụghị nke ọ bụla otu atụmatụ nke mere m jiri zie Echo, ọ bụ ha niile. Ọ bụ okwu Mark, ọ bụ nyocha m maka vidiyo ndị ọrụ na-emepụta, ọ bụ nyocha m nke nyocha ndị na-adịghị mma, ọ bụkwa mgbasa ozi na-echegharị. Kedu ka nke ahụ si daba na ntughari ntụgharị Google Analytic? It doesn't… dị ka emeghị ọtụtụ ahịa njem.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe: I nwere ụlọ ahịa ma belata ndị ọrụ nhicha gị. Ọ bụghị na ụlọ ahịa gị ruru unyi, mana ọ nwere ike bụrụ na enweghị ntụpọ dị ka ọ dị na mbụ. Ihe si na ya pụta bụ na ahịa gị na-ada ka ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ahịa na-adịghị eche na ọ dị ọcha dị ka ụlọ ahịa agbata obi ọzọ. Kedu ka ị ga-esi kọwaa nke a na mbọ azụmaahịa gị? Nwedịrị ike ịbawanye ahịa gị na-emefu n'oge a mana ahịa niile ajụ. E nwere ihe ọ bụla “super ọcha” akara ihe gị ahịa mmefu ego… ma ị maara na ọ nwere mmetụta.
Ọ dị oke egwu - ọ nweghị nke ị na-ere maka nke ọzọ. Nwere ike ịchọrọ ịhazi ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka ị na-ahụ mmetụta ha, mana ọ nweghị nke nhọrọ na ntanetị ahịa zuru oke n'ịntanetị.